“Oprah Winfrey waxay leedahay astaamo hoggaamiye” | Dayniile.com
“Oprah Winfrey waxay leedahay astaamo hoggaamiye”
Jan. 12 WARKA MAANTA Comments Off on “Oprah Winfrey waxay leedahay astaamo hoggaamiye”
Streep iyo Oprah
Atariishada caanka ah ee dalka Maraykanka Meryl Streep ayaa BBC-da u sheegtay in ay aaminsantahay in Oprah Winfrey ay leedahay cod qof hoggaamiye ah, waxayna intaas ku dartay in ay maqashay in Oprah ay ka fikirayso in ay isu soo sharaxdo madaxtinimada Maraykanka.
Oprah ma aysan qirin in ay isa soo sharaxayso iyo in kale , balse kadib hadalkii ay ka jeedisay xafladdii abaalmarinta Golden Globes ee iyada lagu guddoonsiiyay billada, ayaa waxaa soo baxay warar la isla dhex marayo oo ah in Oprah ay tahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan u maleynaynin in Oprah ay isa soo sharixi doonto, haddii ay sidaas samaysane ay noqon doonto arrin uu aad u jeclaado.
Streep ayaa sheegtay in hadalkii Oprah uu ahaa mid leh dhammaan astaamaha hoggaamiyenimo, islamarkaasna ay ka muuqatay mas’uuliyada. Waxa ay ka mid ahayd dadkii Oprah dhagaysanayay habeenkii xafladda, halkaas oo ay Oprah ka tiri “Waxaa soo muuqda oogga waa cusub”, weedhaas oo sacab weyn u dhacay.
Waxa ay la hadlaysay barnaamijka BBC One ee uu daadihiyo Andrew Mar, kaas oo la baahin doono maalinta axadda, waxayna kaga hadlaysay filimkeeda cusub ee The Post, kaas oo ay la jilayaan atooraha Tom Hanks iyo Steven Spielberg, kuwaas oo laftooda muujiyay aragti la mid ah tan Streep.
Hanks ayaa yiri “Waxaan u maleeyaa in Oprah ay soo toosto maalin kasta, iyada oo is weeydiisa wixii ay u qaban lahayd dadkeeda iyo dalkeeda”.
Lahaanshaha sawirkaENTERTAINMENT ONE
Image captionSawir laga qaaday filimka The Post
Streep ayaa horey u dhaleeceysay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isaga oo ku eedeysay in uu canjiley qof curyaan ah. Eedeyntaas ayuu si kulul uga jawaabay Trump.
Filimka The Post ayaa waxa uu ka sheekeynayaa taariikhda dhabta ah ee tifaftirihii wargeyska Washington Post Ben Bradlee iyo hantiilaha Kay Graham kuwaas oo soo daabacay waraaqihii sirta Aqalka Pentagonka sanadkii 1971-dii.
← Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiis kala saxiixday (SAWIRRO)
Trump oo baajiyay booqashadiisii dalka UK →